राजकुन्द्रा हि रा, सतवाट छुट्दा जे देखियो… – Dainik Sangalo
राजकुन्द्रा हि रा, सतवाट छुट्दा जे देखियो…
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन ०६, २०७८ समय: १२:५१:३४
व्यापारी राज कुन्द्रा अ, श्ली ल फिल्म निर्माणको आरोपमा अनुसन्धानका क्रममा थिए । उनलाई ६३ दिनपछि अदालतले रि, हा गर्ने आदेश दिएपछि मंगलवार उनी बाहिर निस्केका छन् । उनले दुई महिना हि, रा, सतमा विताए । एक मजिस्ट्रेट अदालतले सोमबार ५० हजार रुपैयाँ जमानतमा उनलाई रि, हा गर्ने आदेश दिएको हो । कुन्द्रा मंगलबार बिहान ११।३० पछि आर्थर रोड जे लबाट रिहा भए।
कुन्द्रा करिब दुई महिना अघि एक अ, श्ली, ल सामग्रीको आ, रो, पमा प, क्रा, उ परेका थिए। उनलाई लगाएको आ, रो, पपत्रमा उनी वि’रु, द्ध कुनै प्रमाण नभएको दाबी गरेका थिए। उनले दायर गरेको जमानत याचिकामा भनिएको थियो कि उनी यस घ, ट, नामा निर्दोश छन् ।
राज कुन्द्रा बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका पति हुन्। पुलिसले यस घ, ट, ना पूरक आ, रो, पपत्र दायर गरेको केही दिन पछि, कुन्द्राले शनिबार महानगरीय मजिस्ट्रेट अदालतमा जमानत याचिका दायर गरे। अधिवक्ता प्रशांत पाटिल मार्फत दायर गरिएको याचिकामा कुन्द्राले दाबी गरे कि अभियोजन पक्षले कथित पो, र्न फिल्म र्केटमा प्रयोग हुने एप ‘ह, टश, ट्स’ लाई का, नून बमोजिमको अ, प, रा ध सँग जोड्ने कुनै प्रमाण छैन। व्यापारी राज कुन्द्राले दाबी गरेका थिए कि म यस कुरामा कहिल्यै संलग्न छैन । त्यसको कुनै प्रमाण पनि छैन ।
राजले आफै कुनै पनि भिडियो सार्वजनिक गर्दैनन् । त्यसको कुनै प्रमाण फेला नपरेपछि अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
नेपाली सिने जगतमा ‘महानायक को ?’ भन्ने बिषय बेला बेलामा बहस भइ नै रहेको छ। नेपालमा भने राजेश हमाललाई महानायकको ट्याग दिइएको छ। तर यो कुरालाई लिएर सिने कर्मीहरु नै बेला बेलामा विवादमा तानी रहन्छन्।
भर्खरै मात्र कलाकार शोभित बस्नेतले एक कार्यक्रममा बोल्दै महानायाक राजेश हमाल महानायाक होइन भनेर भने पछि सामाजिक संजाल निकै ताती रहेको छ। यो विषयमा केही अगाडि चर्को बहस पनि भएको थियो। कतिले महानायकको रूपमा अभिनेता राजेश हमालको वकालत गरे भने कतिले किन र के कारणले हमाल महानायक हुन् भन्दै प्रश्न उठाए।
केही हमालको अभिनय क्षेत्रप्रतिको लगावलाई लिएर महानायक मान्न तयार पनि थिए भने कतिले त उनी सामाजिक हुन नसकेको, उनका राम्रो फिल्मको संख्या नभएको भन्दै महानायक मान्न आपत्ति जनाए।
महानायिका को ?
केहि समय पहिले करिश्मा श्रेष्ठलाई एउटा कार्यक्रम आयोजना गरि महानिकाको उपाधि दिइएको थियो। अभिनेता राजेश हमालको विशेष आतिथ्य तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा आर के ईण्टरटेन्मेण्टले काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा करिश्मा मानन्धरलाई महानायिको उपाधि प्रदान गरिएको थियाे।
राजेश हमाल महानायक भएकाले कार्यक्रममा हमालबाटै करिश्मालाई महानायिकाको स्यासे लाउन लगाईएको थियो। अहिले फेरि ‘महानायिका’ को ? भन्ने विषयमा विवाद सिर्जना भएको छ।
जसको सूत्रपात अभिनेता भुवन केसीले गरे। भुवनले अभिनेत्री गौरी मल्ललाई ‘महानायिका’को उपाधि दिए। उनको अभिनय क्षमताका कारण मल्ल ‘महानायिका’को उपाधिको हकदार रहेको भुवनले कार्यक्रममा स्पष्ट पारे।
सोही समारोहमा उपस्थित गौरीले भनिन्–‘कुनै पनि उपाधि धान्न सकिने हुनुपर्छ। उपाधिका लागि त्यस व्यक्ति लायक पनि हुनुपर्छ। पाउने व्यक्तिले पनि उपाधिको लागि आफू लायक छु या छैन भनेर अन्तरबोध गर्न आवश्यक छ।’
गौरीले आफूहरुले काम सुरु गर्दा उपाधि पाइन्छ भनेर नगरेको समेत स्पष्ट पारिन्। भनिन्–‘मैले काम सुरु गर्दा कुनै उपाधि पाइन्छ भनेर गरेकै होइन। विस्तारै हिँड्दै हिँड्दै यहाँ आएकी हुँ।
मलाई त यो देशमा कुनै पनि उपाधिको औचित्य छ जस्तै लाग्दैन। यहाँ त उपाधि भनेको कुनै पनि तस्वीरलाई भित्तामा सजाएर पूजा गरे जस्तो मात्र भएको छ। यसैले, मलाई यस्ता उपाधि चाहिएको पनि छैन। हामी काम गर्ने मानिस हौं, हामीलाई काम दिए पुग्छ।’
केका आधारमा महानायक वा महानायिका चुन्ने ?
नेपालमा मात्र हैन बलिउडमा पनि यस्तो बिषय विवादमा आइरहन्छ तर यसको मापदण्ड यो भन्ने कहीँ कतै केही पनि लेखिएको छैन। त्यसैले पनि यस्ता उपाधि सधैँ विवादमा रहने गर्दछ।
त्यस्तै नेपालमा पनि अहिले महानायक वा महानायिकाको उपाधि आफूलाई मन लागेको व्यक्तिलाई आफू खुसी दिँदा ‘महानायक’, ‘महानायिका’ कसलाई भन्ने सर्वसाधारणलाई अन्योल सधैँ पर्ने गरेको छ। सबैको मनमा यतिबेला पनि एउटै प्रश्न उब्जिएको छ। महानायक र महानायिका को ?
Last Updated on: September 22nd, 2021 at 12:51 pm